रोचक जानकारी::आर एम खबर
इंग्ल्याण्डको अक्सफोर्ड स्थित ब्लेनहेम प्यालेसमा रहेको सुनको ट्वाइलेट चोरी भएको छ । ब्लेनहेम प्यालेसमा रहेको १८ क्यारेट सुनको ट्वाइलेट शनिबार राति चोरी भएको हो । चोरको समूहले राति प्यालेसमा पसेर सुनको ट्वाइलेट चोरी गरेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । अमेरिका नाम गरेको सो ट्वाइलेट दरबार अवलोकनमा आउनेले प्रयोग गर्न पाउने थिए । ट्वाइलेट फेला परेको छैन तर चोरीको आशंकामा ६६ वर्षका व्यक्ति पक्राउ परेको प्रहरीलाई...
एजेन्सी। एक नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानले बालबच्चा नभएका अविवाहित महिलाहरु विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्ने देखाएको छ । शीर्ष मनोविश्लेषकहरुको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।एक्लो जीवन बिताइरहेका र बालबच्चा नभएका महिलाहरु घरेलु जिम्मेवारीको बोझ उठाइरहेका आफ्ना साथीहरुको तुलनामा अधिक स्वस्थ र लामो जीवन जीउने गरेको वेल्सस्थित प्रोफेसर डोलानले बताएका हुन् ।डोलान ‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिस्क’ मा यवहारिक विज्ञानका शीर्ष विश्लेषक हुन् । यस्तोमा...
नालीबाट निकालिएको हिलो किन्नका लागि झगडा हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो कि राजधानी काठमाडौंको अति व्यस्त सहर न्युरोडभित्र नालीबाट निकालिएको हिलो (फोहोर) किन्न मारामार हुन्छ । र कहिले त झगडा नै पर्ने गरेको छ । न्युरोडको नालीमा अवरोध आएको सूचना पाउनेबिक्तिकै हूलका हूल आएर हिलो ओगट्ने क्रम चल्छ । ‘केही समयअघि ढल खोतल्दै गर्दा हिलो लिनका लागि कुटाकुट नै भयो,’ अवरोध...
संसारकै एउटी मात्र बिचित्रकी छोरी जसको मुटु छाती भित्र नभई बाहिर नै धड्किन्छ (भिडियो सहित)
मानिसको मुटु छातीभित्र धड्किन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । जस्लाई हामीले महशुश मात्र गर्न सक्छौं । तर एकदमै अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने , रुसको ‘विरसाव्या’ नाम गरेकी एउटा ७ वर्ष निर्दोष बच्चाको मुटु छातीभित्र नभई बाहिर धड्किन्छ । जस्लाई मानिसले देख्न सक्छन् । यो कुरा सुनेर तपाइँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर यो कुरा सत्य हो । वास्तवमा विरसाव्या एक...
धादिङमा घट्यो विश्वले पत्याउन नसक्ने यस्तो अनौठो घटना [थाहा पाउँने सबै चकित]
जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका प्रेम तामाङ धादिङबेंसीस्थित एक होटलमा आपत्तिजनक अवस्थामा रहेको भिडियो बाहिरिएसँगै धादिङ कारागारको चरम बेथिति सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा रोचक त के छ भने कारागारबाट सँगै गएका सिभिल प्रहरी र सहनाइकेहरु कैदी तामाङलाई कोठाभित्र एक महिलासँग थुनिदिन्छन् र आफूहरु रक्सी खाँदै बाहिर पहरे दार भएर बस्छन् । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ सेर्तुङका तामाङ जिल्ला अदालत धादिङबाट कैद सजाय तोकिएका अभियुक्त हुन्...
संसारकै अनौठो मन्दिर, जहाँ रातो खुर्सानीले अभिषेक गरिन्छ पुरा पढ्नुहोस्
दक्षिण भारत विचित्र खाले मन्दिर तथा हिन्दू परम्पराका लागि चर्चित छ । त्यहाँ एउटा यस्तो मन्दिर पनि छ जहाँ रोगबाट बँच्नका लागि खुर्सानीबाट अभिषेक गराइन्छ । तमिलनाडुस्थित वेलुप्पुरम जिल्लामा पर्ने इधांचवाडी गाउँमा रहेको वर्ना मुथु मरियम्मन मन्दिरमा हरेक वर्ष ८ दिनसम्म यस्तो उत्सव मनाइन्छ । जहाँ खुर्सानीको अभिषेक हेर्नका लागि ठूलो संख्या भक्तजनहरु उपस्थित हुन्छन् । मानिसहरुको स्वस्थ रहने कामना पूरा गर्नका लागि रातो खुर्सानीको...
जान्नुहोस् यी राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह नभए नै राम्रो मानिन्छ
प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । यसै आधारमा केही राशि जो एक–अर्काको शत्रु मानिएको छ, त्यस्तै केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै लगाव रहने हुन्छ । राशिमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने यी कुरा जान्नुहोस्, जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह नभए नै राम्रो मानिन्छ । मेष र वृश्चिक – एकतर्फी प्रेमले कसरी समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा यी दुई राशिको जोडीबाट थाहा...
के म मेरो पति र परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु ? अक्सर नव-दुलहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो। र, यो स्वभाविक पनि हो ।जब बुहारी बनेर अर्को घरमा प्रवेश गरिन्छ, सबै कुरा नौला हुन्छन्। परिवारका सदस्य, त्यहाँको वस्तुस्थिती, परिवारको रहनसहन, बानी व्यवहार, चालचलन भिन्न हुनसक्छ। अर्थात आफु हुर्किएको पारिवारिक वातावरणसँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नव-दुलहीले आफुलाई फरक परिवेश, फरक रहनसहन, फरक व्यक्तिहरुमाझ...
यस्ता लक्षण हेरेर थाहा पाउनुहोस्, कस्ता नारी सौभाग्यशाली ?
नारी ईश्वरको अद्वितिय, सुन्दर र रहस्यमयी रचना हो । भनिन्छ, नारीलाई बुझ्न असंभव छ । के भनाई छ भने, भगवानले समेत नारीलाई बुझ्न सक्दैनन् । अर्थात नारी रहस्य हुन् । जहाँ रहस्या हुन्छ, त्यहाँ बढी उत्सुकता हुन्छ । आकर्षण हुन्छ । यही कारण हो कि, नारीले सधै पुरुषलाई आफुतिर आकषिर्त गरेर राखेको छ । भनिन्छ, नारीलाई बुझ्नु, उनको मन पढ्नु, उनको भावभंगीमा जान्न त्यती सहज...
काठमाडौं । महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध सदियौं देखि बहस र विवादको केन्द्रमा छ । महिलाले पुरुषलाई नबुझ्ने र पुरुषले महिलालाई नबुझ्ने गुनासो नयाँ कुरा होइन । तर महिलासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नका लागि उनीहरुसँग केही प्रश्न सोध्नै नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् १. के म तिमीलाई चुम्बन गर्न सक्छु ? कहिल्यै पनि महिलालाई म चुम्बन गर्न सक्छु ? भनेर सोध्नु हुँदैन । महिलाले चुम्बनको लागि पनि सोध्ने...